Duqa Magaalada Muqdisho oo Italy booqasho ku jooga
Duqa Magaalada Muqdisho Abdullahi Muuse oo beryahaan booqasho ku joogay wadanka Talyaaniga ayaa shirar kala duwan la yeeshay madax ka tirsan Gobolada Talyaaniga.
Duqa wuxuu la kulmay Duqa Magaalada Frena ee Gobolka Toscana oo ay ka wada hadleen dhibaatooyinka Magaaladda Muqdisho ka haysta xagga nadaafadda. Abdullahi Muuse oo kulan gaar ah la yeelan doonaa Godoomiyaha Gobolka Lompardia Mr. Formagoni oo xiriir mataanayn ah la lahaa gobolka Banaadir.
Wuxuuna kala hadli doonaa dhinaca caafimaadka iyo dib u dhisidda Magaalada Muqdisho Wuxuu kaloo duqa Magaaladda Muqdisho Abdullahi Muuse la kulmi doonaa Madaxda Magaalooyinka Brato iyo Bistoia oo caan ku ah Warshadaha .
Abdullahi Muuse wuxuu madaxdaas kala hadli doonaa dib u dhisidda magaalada Muqdisho xagga warshadaha yar yar iyo kuwa waaweynba. Ka dibna duqa Magaaladda Muqdishu wuxuu uga sii gudbi doonaa Magaalada Genova ee gobolka Liquria.
Jimcaha ayuu Duqu la kulmi doonaa Duqa cusub ee Magaalada Roma Mr. Valtroni oo uu faallo dheer ka siin doono Dhibaatooyinka magaaladda Muqdisho ay la kulantay 10 kii sano ee wadanka dhibaatada soo gaartay.
Wuxuuna uga gudbi doonaa Duqa Magaalada Muqdisho Abdullahi Muuse Gobolka Siciliya oo halkaas kula kulmi doono Madaxda Gobolkaas.
Intii uu kulamadaas ku dhex jiro, Mr. Abdullahi Muuse wuxuu udubada u dhigi doonaa xiriir wanaagsan oo dhex mara Magaalooyinkaas uu booqday iyo Magaalada Muqdisho oo dhibaato xoog leh ka soo gaartay dagaaladdii sokeeya ee wadanka ka dhacay.